Kismaayo News » Xisbiga XIIS oo shir ku qabtay London
Xisbiga XIIS oo shir ku qabtay London
Kn: Magaalada London ee cariga boqortooyada Ingriiska waxaa lagu qabtay shir balaaran oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Shirka oo lagu soo dhaweynayay wasiirkii hore ee warfaafinta, boostada, isgaarsiinta iyo gaadiidka ahna gudoomiyaha Xisbiga XIIS, Eng. Cabdullahi Cilmooge Xirsi.
Cali Xaaji oo kamid ahaa musharixiintii Farmaajo kula tartamay xilka madaxweynaha, Dr. Nuur Xasan oo bare ka ah jaamacad ku taala London, agaasimaha amniga Jubbaland Mukhtaar Dheere iyo masuuliyiin kale ayaa kamid ahaa marti sharaftii ka qayb gashay shirka lagu soo dhawaynayay Cilmooge.
Cilmooge oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ingiriiska uga mahadceliyay soodhaweynta diiran ee ay u sameeyeen, kadibna wuxuu ka warbixiyay xaaladda dalku ku suganyahay iyo qaabkii looga qayb qaadan lahaa sidii lagu samato bixin lahaa iyo qof waliba doorka uu ku yeelan karo.
Gudoomiyaha Xisbiga XIIS ayaa la filayaa inuu maalmo sii jooga cariga Ingiriiska ka hor inta uusan u duulin dalka Kenya, waxuuna gooni gooni u qaabili doonaa Jaaliyaddaha Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska.